Thailandy: Voararan’ny Youtube ny Horonantsary ‘Ilay Mpanao Didy Jadona Lehibe’ an’i Charlie Chaplin · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2017 20:45 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Ελληνικά, русский, Italiano, 简体中文, 日本語, 繁體中文, English
Voasakana tany Thailandy ity horonantsary ity. Manasongadina kabary iray an'i Charlie Chaplin (mpanao didy jadona) ity ampahany misy dikanteny Thai ity: ”handalo ihany ny fankahalan'ny olona, ary ho faty ireo mpanao didy jadona, ary hiverina any amin'ny vahoaka ny fahefana nalain'ireo [mpanao didy jadona] tany amin'ny vahoaka. Ary raha mbola ho faty foana ho azy ny olona, tsy ho ripaka mihitsy ny fahafahana.” Pikasary avy ao amin'ny Youtube
Voasakana tao amin'ny Youtube ilay horonantsarin'i Charlie Chaplin mitondra ny lohateny hoe ‘Ilay Mpanao Didy Jadona Lehibe’ noho ny fangatahan'ny fitondrana miaramila.
Fakantahaka maneso ny fiakaran'ilay mpitarika Nazi Adolf Hitler tamin'ny 1940 ‘Ilay Mpanao Didy Jadona Lehibe’, horonantsary iray tao Hollywood nataon'i Chaplin, mpanao hatsikana.
Ny 11 Jona 2017, ningain'ny Tambajotra Akademika Thai ho an'ny Zo Sivily ny vahoaka hijery ny horonantsarin”Ilay Mpanao Didy Jadona Lehibe’ ao amin'ny Youtube, izay ampirisihan'i Chaplin ny vahoaka mba haka indray ny fahefana any amin'ny mpanao didy jadona.
Nandray ny fahefana ny tafika Thai tamin'ny 2014 kanefa nivoady ny hamerina ny fitondram-bahoaka vantany vao mipetraka ireo fanavaozana ara-pôlitika sy ara-pifidianana. Natao mba hanamboarana ny làlana mankany amin'ny fifidianana ny lalàmpanorenana nolanina tamin'ny 2016, saingy milaza ireo mpanao tsikera fa nanamafy ny fitondrana miaramila ao anatin'ny biraom-pirenena izany.
Tamin'ny 24 Jona, nitatitra ireo mpampiasa aterineto fa tsy afaka nidirana ilay horonantsary misy dikanteny Thai tao amin'ny Youtube. Ho solon'izany dia nampiseho ny hafatra mahazatra ny pejin'ilay lahatsary: ”Tsy afaka jerena ao amin'ity firenena ity io horonantsary io noho ny fitarainana ara-dalàna avy amin'ny fanjakana.”
Ny 24 Jona no andro ahatsiarovan'i Thailandy ny rivopanovàna tamin'ny 1932 izay namarana ny fitondrana fenon'ny mpanjaka tao amin'ny firenena.
Niteny ny vondrona Thai Mpisolovava ho an'ny Zon'olombelona fa mety avy amin'ny Minisitry ny Toekarena sy ny Fiarahamonina Dizitaly ny fangatahana handrara ilay horonantsary.
Nanoratra tao amin'ny Twitter i Pravit Rojanaphruk‏, mpanao gazety menavazana, fa ”adala sy tsy refesi-mandidy mampihomehy” ilay baiko avy amin'ny fitondrana miaramila.
Adala & tsy refesi-mandidy mampihomehy be ilay mpanao didy jadona ao Juntaland (enti-milaza an'i Thailandy) izay manakana ilay sarimihetsik'i Charlie Chaplin manesoeso ny mpanao didy jadona.
Nisy mpikatroka mafana fo sasany te-hankalaza ny fahadimy amby valopolo taonan'ilay rivopanovàna amin'ny fanasongadinana ny tolona mba hanatsaharana ny didy jadona ataon'ny miaramila ao amin'ny firenena. Nomelohan'izy ireo ho nanafoana ny zon'ny vahoaka ny fitondrana miaramila amin'ny fampiasany ny lalàna Lèse-Majesté (lalàna manameloka ny ‘fanompàna mpanjaka’) mba hisamborana sy hanenjehana ireo mpanakiana ny fanjakana.
Tamin'ny 27 Jona, naverina ilay lahatsary, saingy mijanona ho lohahevitra mafana ao amin'ny media Thai ny tantaran'ny fanakanana azy.
Nizara lahatsoratra mamaritra ny baiko fanakanana ilay horonantsary ho ‘fanapahankevitra ratsy indrindra’ nataon'ny fanjakana tamin'ny fisorohana ny olona hahatsiaro ny rivopanovàna tamin'ny 1932, ny gazety Bangkok Post:
Mbola ny fanaovana zavatra mivaingana halaza kokoa indray no hany vitan'ny fitondrana amin'ny alàlan'ny sivana maherisetra ataony.
Naka fahefana ity fitondrana ity teo ambanin'ny fampanantenana tokana hitondra fampihavanana. Tsy ny asa fotsiny no tsy ahombiazany. Vao mainka manimba ny fihavanana eo amin'ireo ankofaly sy vondrona ny hetsika toa ireo fanafihana ny fahaiza-mandanjalanja sy ny fahamora-tohina tamin'ny faran'ny herinandro teo.
Nitatitra ihany koa ny Bangkok Post fa hatramin'ny nandraisan'ny Youtube indray ilay lahatsary, tonga dia niakatra niala tamin'ny jery zato teo ho eo ka tonga maherin'ny arivo ireo jery.